प्रचण्डलाई भेट्नसाथ ओली ग’म्भीर, वामदेव राति नै गए बालुवाटार ! – Namaste Dainik
प्रचण्डलाई भेट्नसाथ ओली ग’म्भीर, वामदेव राति नै गए बालुवाटार !
September 3, 2020 NamastedainikLeaveaComment on प्रचण्डलाई भेट्नसाथ ओली ग’म्भीर, वामदेव राति नै गए बालुवाटार !
काठमाडौं,१७ भदौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने ईच्छा दोहोर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्या’रोमा परेका छन् । आफूलाई परेको अप्ठ्या’रोलाई पार लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ बालुवाटारमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । तर, कुनै निश्कर्ष निस्किएन ।
प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राति नै बामदेव गौतमसँग बालुवाटार‘गो’प्य’छलफल गरेका छन् । बालुवाटारमा विहीबार बिहान ११ बजे नेकपा सचिवालयको बैठक बस्दैछ । यो बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सीटमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियसभाको रिक्त सीटमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई लैजान चाहन्छन् । तर,उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई मनोनित गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ईच्छामा तगारो हालिदिएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा अहिले एउटा सीट रिक्त छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने यो सीटमा डा.खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र अर्थमन्त्रालय उनैको जिम्मा लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना देखिन्छ । तर,राष्ट्रियसभाको यो सीटमा उपाध्यक्ष गौतमले दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली त’नावमा छन् ।
विहीबार साँझको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग डा. खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा पठाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर,प्रचण्डले वामदेवलाई टार्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएपछि प्रधानमन्त्री एकाएक ग’म्भीर देखिएको स्रोतले बतायो ।